Chọpụta atụmatụ mgbụsị akwụkwọ oyi nke iche echiche Mu | Bezzia
Maria onyekwere | 13/10/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi
Nke a abụghị nke mbụ anyị na -agwa gị gbasara iche echiche Mu, a ụlọ ọrụ ejiji na -adigide Ebumnobi ya bụ inye aka mee ka ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi mara nke ọma, nwayọ na mmetụta dị mma. Ọbụghịkwa oge mbụ anyị ga -egosi gị atụmatụ mgbụsị akwụkwọ oyi na -apụta maka ụdị izu ike na ntụsara ahụ ha.
Uwe ndị ahụ sitere n'ahịrị ahịhịa na -apụta ìhè na nchịkọta echiche ụbịa nke ụbịa Mu, a oru efu efu nke a na -emepụta igwe nrụpụta site na ngwakọta nke eriri enwetara site na ihe emegharịgharị na eriri na -amaghị nwoke na -adigide. Na ị gaghị enwe ike wepụ anya gị na atụmatụ corduroy ha na ndị nwere ụkpụrụ nlele na -acha anụnụ anụnụ na ụda tja.
2 Ihe ndị dị mkpa
Anyị hụrụ palette agba nke Thinking Mu ahọrọla maka nchịkọta ọhụrụ ya. Na ọ bụ ndị ahụ elu, oroma, taịl nile na blues, Ha na-abịa ime uwe anyị n'oge mgbụsị akwụkwọ-oyi iji nweta ụda dị mma na nke na-enye ọerụ. Maka anyị, ihe ọ bụla na -etinye ihu dị mma na ihu igwe adịghị mma mgbe niile na -adị ka nnukwu nhọrọ.
Mgbe mmadụ chọpụtara ihe uwe sitere na ahịrị ahịhịa, Na-enye aka na akụnụba okirikiri site na imegharị oke mkpofu owu site na uwe ochie na pulp osisi sitere n'oké ọhịa na-adigide, ọ dị mfe iche n'echiche ịdị mma nke ndị a nwere ike inye gị na ndụ gị kwa ụbọchị. Uwe a na -agbatị agbagọ na uwe mwụda midi na -agbanwe na akwa na -agbanwe agbanwe bụ ihe iberibe kacha amasị anyị.
Ọ dịkwa mfe ịhụ uwe corduroy owu organic site na nchịkọta: dungarees nwere traụza ogologo, ogologo ogologo ụkwụ, jaket denim, obere uwe mwụda nwere akpa anọ ... Uwe ndị jikọtara nke ọma na t-shirts Psycho na jumpers ajị anụ si na katalọgụ ha.
Na anyị na ndị nke gara aga, anyị enweghị ike ịgọnarị uwe mwụda na uwe elu nwanyị nwere aka ọfụfụ, nke ukwuu na ụdị ejiji obodo na ahịrị ndị a na -eyi n'oge okpomọkụ a.
Ọ na -amasị gị ịtụ atụmatụ mgbụsị akwụkwọ Mu n'oge mgbụsị akwụkwọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Chọpụta atụmatụ mgbụsị akwụkwọ oyi nke iche echiche Mu